Hampandroso ny toekarena : hanampy ny vehivavy ny BPW | NewsMada
Hampandroso ny toekarena : hanampy ny vehivavy ny BPW
Hisantatra ny fandaharanasa famelabelaran-kevitra sy fizarana traikefa ho an’ny vehivavy sy ny tanora ny fikambanana Business et professional women-Madagascar (BPW). Tanjona ny hampiroborobo ny fahaiza-mitarika sy ny fivelaran’ny vehivavy eo amin’ny asa. Hetsika voalohany hotanterahina amin’ny alakamisy ho avy izao ny fizarana ny lohahevitra « Vehivavy sy ny fandalinana amin’ny sehatra iray manokana » (expertise) eny amin’ny foiben’ny frankofonia Antaninarenina. Hitarika ny dinidinika Rakotondrainibe Carole, manampahaizana momba ny fampandrosoana nomerika sy ny fandraharahana. Vehivavy faharoa i Zafindramaro Alexandre Eric, sekretera mpanatanteraka momba ny tahiry ho an’ny tontolo iainana (Cafe). Tsy zovina amin’ny tontolon’ny asa sy fandraharahana intsony ireo andriambavilanitra ireo. Hizara ny fahaiza-manaony ho an’ny vehivavy mitovy aminy izy ireo amin’ny sehatrasany tsirairay avy.
Vinan’ny fikambanana amin’ny alalan’ny fandaharanasa ny hametraka sehatra fifanakalozana ahazoan’ny manampahaizana samihafa sy ny vehivavy mifanampy. Tohanana ihany koa ny tanora vonona hirotsaka amin’ny asa na hampiroborobo ny famoronana asa ho an’ny tenany.
Ivondronan’ny vehivavy mpandraharaha eto amintsika ny BPW Madagascar hanampy ny mpiray tanindrazana hampandroso ny toekarena. Niforona ny taona 2016 ny fikambanana izay mpikambana amin’ny BPW International.